कांग्रेस युवा नेता ठाकुरले ओलीलाई दिए यस्तो खतरनाक दनक, बालुवाटारमा भयो हङ्गामा !::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
कांग्रेस युवा नेता ठाकुरले ओलीलाई दिए यस्तो खतरनाक दनक, बालुवाटारमा भयो हङ्गामा !
काठमाडौं –प्रधानमन्त्री केपी ओली राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीभन्दा पनि एउटा सानो समूहको घेराभित्र रहेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ ।
कांग्रेसका युवा नेता विकास ठाकुरले ओलीलाई सानो घेराभन्दा माथि उठ्न सुझाव दिएका छन् । ठाकुरले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले बोल्दा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । जथाभावी बोल्नु हुँदैन ।’
राजनीतिक स्थायित्व, विकास, समृद्धि, शान्ति र सुशासनको साथ चर्को राष्ट्रवादी नारा लगाएर बहुमत पाएका ओलीले अहिले आएर नेपाली जनताको मानमर्दन गर्न थालेका छन् । उनले क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछानेलाई व्याङ्ग्य गरेर क्रिकेट खेलप्रति नकारात्मक सन्देश दिएका छन् ।
ओलीले २–४ वटा डल्ला भनेर क्रिकेटप्रति वितृष्णा फैलाउने काम गरेका छन् । पूर्वराजा होस् वा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सबैप्रति असंहिष्णु देखिँदै आएका ओलीको नकारात्मक सोँचले धेरै नेपाली जनताको मन दुखाएको अभियोग लाग्न थालेको छ । ओली समग्र मुलुकको भन्दा पनि कम्युनिस्टहरूको प्रधानमन्त्रीका रुपमा देखिएका छन् ।
यसले ओली सबै नेपालीको प्रधानमन्त्री हुन् भन्ने आभाव समाप्त हुँदै गएको आरोप छ । ‘मलाई प्रधानमन्त्रीको अपमान गर्नुहुन्न भनेर लामो शिक्षा दिने साथीहरूले ओलीलाई के भन्नुहुन्छ ? एउटा खिलाडीको अपमान गर्ने अधिकार ओलीलाई कसले दियो ?’, सामाजिक सञ्जालमा ओलीप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै ठाकुरले लेखेका छन्, ‘के जनताले ओलीलाई कहिले मधेसीको त कहिले कांग्रेसको या खेलाडी वा पूर्वराजाको अपमान गर्न मात्रै जिताएको हो त ?’ ‘प्रधानमन्त्री र नेकपाका भक्तहरू पहिले ओलीलाई सिकाउनुस त्यसपछि मसँग कुरा गर्नु होला वा मलाई सम्झाउनुहोला’, फेसबुकमा ठाकुरले भनेका छन् ।